UFC 262 - UFC na Predicionos - Uke blog - jluis37.com
Anyị abịaghachila na PPV ọzọ tozuru oke juputara na egwuregwu dị ịtụnanya. Kaadị ahụ nwere ụfọdụ ọgụ siri ike mana dabara adaba na anyị nwere ike ị nwere ọtụtụ ọgụ nke ndị mgba n’abalị na ngwụsị nke abalị a. Anyị nwere igwe mmadụ juru na Toyota Center na Houston, na-abịa ịhụ onye nọchiri Khabib Nurmagomedov. Kaadị a juputara na egwuregwu nzuzu, ka anyị banye n’ime!
Shane Burgos na Edson Barboza
Ọgụ a bụ otu n’ime ihe nzuzu dị na kaadị a, agha zuru oke ga-ewere ọnọdụ na nkewa featherweight. Ndị ikom abụọ a nọ n’ụzọ dị iche iche nke ọrụ ha ma kpebie ịhapụ ihe niile dị n’ime Octagon iji gosipụta na ha kwesịrị ịgbanye na eriri Featherweight ahụ. Anyị nwere ọkwa 9 Shane “Ajọ Ifufe” Burgos ewere na vetiran soja n’usoro 13 Edson “Junior” Barboza.
Burgos bịanyere aka na 2016 site na ndị UFC dị ka kpakpando 8-0 na-enweghị mmeri na njedebe 100%. Ọ dịrị ndụ ruo hyp na-etinye aka na ọgụ 3 nke abalị kemgbe ọ bịarutere ma gosipụtawo nkà ya site na ịmecha ndị agha kacha elu na UFC.
Burgos nwere ikike na-adịghị mma n’aka ya, ọ ka na-eguzo dị ka nwoke mbụ ịkụtu ike UFC siri ike Makhwan Amirkhani. Burgos nwere ụdị ọgụ anụ ọhịa, ọ na-ekwenyekwa na abalị ọhụụ ga-atọ ụtọ maka ndị na-agba ọgụ.
Burgos bụ eriri ojii na Tiger Schulmann’s MMA nke bụ ụdị ọgụ mara mma nke gụnyere ịgba egwu na ịkụ ọkpọ. Burgos di nma nke oma ma gosiputa oge a na ugbo ozo na Octagon. Ọ na-aga na ngwụsị izu a iji kwado nkà ya megide onye agha ochie na Barboza.
Edson Jr Barboza bụ otu n’ime UFC ụlọ aha, na-alụ ọgụ na ndi-mo-Octagon ruo ihe karịrị 10 afọ Barboza etinye aha ya na uwa agha map. A na-akọwakarị Barboza dị ka onye na-agba bọọlụ kacha sie ike na ndị UFC dịka a maara ya iji kwụsị ndị iro ya na iku ume imeju ya.
Barboza kwadoro ihe nketa ya mgbe ọ lụchara ndị niile aha ha na UFC ọgụ na Tony Ferguson, Khabib Nurmagomedov na Anthony Pettis. Barboza na-etu ọnụ egwuregwu gbara ọkpụrụkpụ na azụ nke eriri ojii ya na Muay-Thai na Taekwondo.
Mgbe afọ iri nke ọgụ na fechaa, Barboza tụgharịrị na Featherweight afọ gara aga. N’ịbụ onye nwere mmalite nke 1-1 na featherweight, na ọnwụ ya na-abịa site na mkpebi nkewa na Dan Ige siri ike, Barboza na-agụ agụụ ịgbakwunye mmeri na kọlụm ya.
Nke a bụ ọgụ kachasị nso na kaadị a dabere na nsogbu, anyị kwenyere na nke a bụ ọgụ siri ike maka ma ndị nwoke. Egwuregwu a na-alụ ọgụ n’abalị edepụtara ya, ma ndị ikom a ama ama maka itinye aka na agha na mbụ. Ha abụọ nwere aha ọma maka inye ndị na-agba egwu nnukwu ihe ngosi ma anyị anaghị atụ anya ihe ọ bụla na ngwụcha izu a. Anyị na-eche na ọgụ a ga-abụ nkeji iri na ise slugfest ebe ụmụ nwoke abụọ na-eti ibe ha ihe ma otu n’ime ha na-ehichapụ mkpebi mkpebi siri ike.
Ndị ikom abụọ a dị mma ebe ọ bụla ọgụ a na-aga, mana ndị na-alụ ọgụ nwere ike ịtụ anya ịlụ ọgụ kachasị amasị ha. Burgos ga-ele anya iji uru ya rute Barboza site na mpụga ma jiri mkpirisi ya na ọnọdụ ọnọdụ ahụike. Ebe anyị nwere ike ịtụ anya ka Barboza jiri ụkwụ na imeju ya kpuchie anya wee kwụsị mmegharị nke Burgos.
The-eto eto na-ekwe nkwa ma a oké ọgụ na-fọrọ nke nta na-ekwe nkwa mgbe ọgụ Fans na-akụ na a izu ụka. Anyị na-adabere n’ebe onye agha nọ ebe a na Barboza ma anyị kwenyere na ọ ga-eme nke ọma iji bulie aka ya.
Amụma – Edson Barboza site na Mkpebi – Nsogbu Osisi- 3.65 * (Nsogbu bụ isiokwu ịgbanwe)
Tony Ferguson na Beneil Dariush
Anyị enwetala onwe anyị banger ọzọ na ngalaba-isi nke mgbede a, nsonaazụ egwuregwu na ngalaba dị larịị iji chọpụta onye ọzọ bogeyman. Nke a bụ usoro zuru oke maka oke ọgụ metụtara ụmụ nwoke abụọ siri ike na-aghọtaghị echiche inyefe. Anyị nwere ugbu a bogeyman nke nkewa n’usoro 5 Tony “El Cucuy” Ferguson ewere na siri ike Iranian n’usoro 9 Beneil Dariush.
A na-akpọ Tony Ferguson aha ya bụ bogeyman n’ihi ụdị ịlụ ọgụ ya na-atọ ọchị. Mụ na Tony, ndị na – alụ ọgụ na – atụ anya mgbe niile ihe a na – atụghị anya ya ka ọ na – atụba ihe kachasị iche. Tony Ferguson nwere ngwa agha dịka ogwe aka na-agbagharị, akwụkwọ ndị a na-atụgharị na ihe ndị ọzọ.
A na-atụ anya na Tony ga-abụ nwoke ga-akwụsị njedebe ọmarịcha Khabib n’ihi ike ya imebi ihe mgbe ọ nwere azụ ya n’ala. Tony nwere otu n’ime ihe ndị na-adọrọ mmasị na UFC mgbe ọ gara na mmeri 12-ọgụ na-enwe ọtụtụ arụmọrụ nke abalị na ọgụ nke abalị na-eto eto iji kwado maka ụdị ọgụ ọgụ ya.
Tony enweela ọhụụ ole na ole na-adịbeghị anya na onyinye kacha mma na akwụkwọ akụkọ Justin Gaethje na Charles Oliviera. Tony egosiwo na ya siri ike site na ịlaghachi ike karịa mgbe ọ bụla ma ọ ga-ele anya ikwu okwu na ngwụcha izu a.
Beneil Dariush ruru oke ọgụ mgbe ọ gbasasịrị ọkwa UFC 12-15 n’oge mmeri ya na-adịbeghị anya 6-ọgụ. Dariush na-eme nke ọma dịka ha na-abịa, o nwere ntinye 8 na knockouts 5 na kọlụm mmeri ya nke na-ekwu okwu ọma banyere nka ya dị ka onye egwu egwu agwakọtara agwakọta.
Dariush enweela arụmọrụ 3 nke abalị na 1 ọgụ nke abalị na nleta 5 ikpeazụ ya na Octagon, nke a bụ nwoke setịpụrụ inye ya kachasị mma oge ọ bụla ọ batara ịlụ ọgụ. Dariush nwere eriri ojii na BJJ na Muay-Thai na-egosi na ọ dị ize ndụ ebe ọ bụla ọgụ a na-aga. Dariush na-achụ UFC gold na mmeri Tony ga-etinye ya n’ọkwá dị elu-5.
N’ịtụle njiri mara nke ndị ikom abụọ a, o siri ike ịkọ ebe ọgụ a na-aga mana anyị nwere mmetụta na Dariush ga-enwe ọgụ na-ebu ibu. Oliveira gosiri na ọkwa ọkwa Jiu-jitsu bụ ụzọ dị ukwuu iji merie Tony Ferguson na Dariush na-etu ọnụ egwuregwu BJJ siri ike nke ga-agba ya ume ịhọrọ ụzọ ahụ. N’oge na-adịghị anya Tony ga-eleba anya n’iji anụ ọhịa ya na-egbu egbu nke gụnyere ịgbanaka ikpere ma gbanwee ntụgharị iji wepụ Dariush.
Ihe a ọ bụ njedebe oge Tony Ferguson ka ọ bụ onye bogeyman ka nwere ọkụ n’ime ya iji sọọ mpi n’ọkwa elu? Anyị na-eche na Tony Ferguson dị ka onye dị egwu bụ nnukwu egwuregwu ebe a, ọ ka bụ otu ọgụ ọgụ 12 ahụ Tony n’agbanyeghị ọnwụ ya ndị na-adịbeghị anya, anyị chere na ọ ga-egosipụta nka ya na ngwụcha izu a iji nweta mkpebi ma ọ bụ mmeri TKO. Idtụle Dariush na-ama jijiji ọtụtụ mgbe n’ọgụ ya, anyị chere na imecha ga-ekwe omume ebe a.
Amụma- Tony Ferguson site na Knockout – Nsogbu Osisi- 6.20 * (Nsogbu bụ isiokwu ịgbanwe)
Charles Oliveira na Michael Chandler
Oge mmemme oge, nke a bụ otu n’ime ọgụ a na-atụ anya na 2021 nke ga-ekpebi onye ga-anọchi ewu Khabib Nurmagomedov. Fans Fans enwewo obi ụtọ ịchọta onye mmeri na-esote nke ndị kachasị UFC mgbe ọ bụla. Ogu a ga-ara; anyị enweela ọgụ n’etiti ndị isi abụọ dị iche iche na-eche ihu. Anyị nwere ọkwa 3 Charles “Do Bronx” Oliveira na-ewere onodu 4 “Iron” Michael Chandler maka ndi-mo-Lightweight Championship.
Na-alụ ọgụ site n’akụkụ uhie, Charles Oliveira anọwo na UFC ruo ihe karịrị afọ iri ma tinye ọrụ ọ ga-emesị kwesị inweta aha aha a. Charles bu onye oru Jiu-Jitsu di elu, ikike ntinye ya bu otu n’ime ndi UFC. Charles jidere ndekọ maka mmeri kachasị site na nrubeisi na UFC gafee ngalaba niile yana ntinye 14 na ngwa agha ya.
Charles nọ na mmeri 8-win win nke metụtara ya ịdọgbu ndị na-agba mgba siri ike na akwụkwọ UFC. Nnukwu mmeri ya nwere megide bogeyman Tony Ferguson mgbe ọ chịkwara ya maka oge 3 na-emeri 30-26 gafee akara akara onye ọka ikpe niile. Charles bụ egwuregwu siri ike maka onye ọ bụla nọ na nkewa a ma ọ ga – ejide eriri UFC na ngwụsị ụka a.
Na-alụ ọgụ site na akụkụ na-acha anụnụ anụnụ, Michael Chandler bụ nwoke ọhụrụ na UFC lightweight roster onye rutere weghara ọlaedo. Chandler bụ naanị otu ọgụ na-adịbeghị anya na ndị UFC, mana ọ nọ na-asọ mpi n’ọgụ a na-agba n’ọgụ a na-eme n’ọkwa dị elu. Chandler abụwo onye mmeri dị oke egwu na Bellator MMA ma gosipụta na ọ bụ onye agha toro eto.
Chandler bụ onye mgba NCAA bụ onye gbanwere egwuregwu ọgụ ya ka ọ bụrụ ọkpọ ọkpọ na aka dị arọ. Chandler kụrụ aka Dan Hooker siri ike na ọkara gburugburu nke na-ekwu okwu ọma banyere ike ya. Chandler nwere akara 77% mechara 10 knockouts na ntinye 7 na ọrụ ya. Chandler ekwuola ya ọtụtụ mgbe na “anọghị m ebe a ogologo oge, anọ m ebe a oge”. O kwenyere na ọ nọ na elu nke ọrụ ọgụ ya na ụdị ọkwa ya ga-ezu iji weghara aha UFC Lightweight.
Nke a bụ agha dị n’etiti ndị na – emecha ọrụ abụọ, Charles bụ onye na – eme ihe ngosi na – egbu egbu nke nwere ike iwepu ntinye site na ọnọdụ ọ bụla yana Chandler bụ onye na – akụ ọkụkụ nke nwere ike ịkụ aka onye ọ bụla na ndepụta ahụ ma ọ bụrụ na ọ dị ọcha. Anyị na-atụ anya n’ọhịa n’ọgụ a, mana onye na-agwụcha na onye na-enweta aha ahụ? Fans na-alụ ọgụ ga-akụ na ngwụsị izu a iji chọpụta.
Charles Oliveira emeela ka ọ dịkwuo mma ma ụzọ ya gaa mmeri ka na-adabere ịdada Chandler ma nyefee ya. Ọ bụ ezie, Chandler ga-eji nnukwu aka ya nwee uru dị egwu ma ọ ga – ele anya itinye nrụgide ahụ mgbe ọ na – achọ ohere iji gbaghaa egbe iji kpochapụ Charles.
Chandler bụ onye mgba ama ama na nwoke siri ike n’ime ha abụọ ga-enwe ike ịkwụsị nnabata. Anyị na-eche na inwe ahụmịhe mmeri na mmalite ya, Michael Chandler ga-enwe ike ịchọta ntụpọ ahụ iji kụtuo Charles Oliveira. Fans na-alụ ọgụ nwere ike ịba uru na nkwalite mmeri anyị ugboro abụọ site na ịkụ nzọ na Michael Chandler ma ọ bụrụ na ọ gwụchaa ọgụ ahụ, ndị Fans ga-enweta mmeri abụọ.
Amụma- Michael Chandler site na Knockout – Nsogbu Osisi- 3.15 * (Nsogbu bụ isiokwu ịgbanwe)
Jide ọgụ ndị a dị ịtụnanya naanị na UFC PPV https://www.ufc.com/ppv ma nweta UFC kachasị mma naanị na Stake.com https://stake.com/sports/mma/ufc/ufc-262-oliveira- vs-chandler / agba
Prediksi Malam Pertarungan UFC – 17 Juli – Stake blog